musha / Applications / Induction Preheating / Induction preheating Welding mota transaxle
Category: Induction Preheating Tags: mota preheat Welding, induction post kutenderera, induction preheat welding, induction preheat welding maitiro, induction preheater, induction preheating, induction preheating mota, induction weld preheating, preheat welding
Chinangwa: Kugadzirira preheat 3.6 ”(91 mm) kunze kwehupamhi simbi ekisero ine mitsara mitatu yeweld kusvika ku662 ºF (350 ºC) netambo yega yega iri kupisa kusvika mukati memaminitsi mashanu
Material: Mutengi akapa 3.6 ”(91 mm) OD simbi ekisero
Kutya: 662 ºF (350 ºC)
Equipment: DW-HF-45kW 50-150 kHz induction heat system yakagadzirirwa chiteshi chekupisa chiri kure chine zvisere 1.0 μF capacitors mune akateedzana akafanana
- Imwe chete nzvimbo yemukati yakabereka induction heat coil yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa zvakanakira iyi shanduro.
Induction Kuchenesa Maitiro: Iyo simbi axel yaive yakapendwa netembiricha inoratidza pendi uye thermocouple yakasungirirwa kuchikamu. Iyo induction yekupisa coil yakaiswa mukati meiyo simbi axel uye magetsi magetsi akavhurwa. Maitiro aya akagonesa waya yemutsara kuti ipise kusvika ku662 ºF (350 ºC) mukati memasekonzi mashanu sezvaidiwa nemutengi. Magetsi anokwanisa kuverengerwa kudzima mushure menguva yekuda kupisa - masekondi mashanu mune ino kesi. Ipapo, iyo coil inogona kuendeswa kune yechipiri weld mutsara, uye yechitatu weld mutsara.
Mhedzisiro / Maitiro Ekubatsira: Iyo coil iri mukati meiyo axle, haina kupinda munzira, uye inogona kubva yaendeswa nyore nyore kune inotevera weld mutsara
- Kumhanyisa: Induction uye nzira yakatsanangurwa inoita kuti iweld mitsetse ipiswe kutembiricha mukati meiyo yakanangwa
- Yemahara emabara kuyedza: Ichi chirongwa chitsva chemutengi, uye HLQ Lab Service Kumbira kuyedza yakagonesa mutengi
edza maitiro avo uye nzira yekuvandudza yakagadzirwa